Fa maninona i Espana no mijanona ho fanararaotana lehibe ho an'ny fizahan-tany eran-tany?
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Fa maninona i Espana no mijanona ho fanararaotana lehibe ho an'ny fizahan-tany eran-tany?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Miomana amin'ny ho avy mahafinaritra ny fizahantany manerantany miaraka amin'ny COVID tsy voafehy.
Izany no valin-tenin'ny maro amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Raha te hiasa indray izao tontolo izao dia mila mpitondra sy olona manana vina. Mila olona vonona sy mahay mihetsika koa izany.
Mila fanampiana maika ny fizahantany manerantany ary ny UNWTO dia tsy nahavita nitondra mpitarika, indraindray manao ankivy ny lalao amin'ny lalao taktika sy politika.
Arabia Saodita dia nandray ny andraikitry ny mpitarika manerantany miaraka amin'ireo firenena manan-danja ao amin'ny UNWTO.
Ny minisiteran'ny fizahantany Arabia Saodita nanasa saina 1000 mamiratra indrindra amin'ny fizahantany amin'ny ho avy Fampiroboroboana ny Konferansa momba ny maha-olombelona any Riyadh.
Raha ny filazan'ny mpikambana iray ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, Big Moment ho an'ny fizahan-tany eran-tany dia amboarina ao amin'ny Fanjakana Saudi Arabia.
Ny fizahan-tany dia nandia fanamby saika tsy azo natao hatramin'ny fiandohan'ny taona 2020 noho ny areti-mandringana COVID-19.
Any Arabia Saodita, ny minisitry ny fizahantany HE Ahmed Al-Khateeb dia nampiseho tarehy tsy tany amin'ny fireneny ihany. Izy no kintana fanantenana mamirapiratra hatrany Karaiba ka hatrany Afrika.
Ny Fanjakana dia nanokana vola an'arivony tapitrisa dolara tsy ho an'ny fampivoarana ny mety ho fizahantany mivoatra fotsiny fa mba hanampiana ny sisa amin'izao tontolo izao hitazonana hatrany io sehatra io.
The Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) mandalo krizy fitarihana miaraka amin'ny Sekretera jeneraliny milalao lalao roa.
Saudi Arabia dia teo mba hanampy amin'ny lafiny ara-diplomatika sy vola. Tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity dia nanokatra ivon-toerana iray any Riyadh ny UNWTO. ihany koa WTTC, ny fikambanana miorina any UK izay misolo tena ireo mpiantsehatra manokana tsy miankina lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany dia nanokatra ivon-toerana iray any Riyadh.
Tsikaritr'i Arabia Saodita ny fahasarotan'ny toe-java-tsarotra nisy an'ny UNWTO noho ny tsy fahampian'ny fanohanana avy any Espana.
Ny hetsika toy izany mazava ho azy dia mitaky fanohanan'ny mpikambana UNWTO amin'ny fivorian'ny UNWTO General Assembly ao Maraoka. Ireo manam-pahaizana akaiky ny olana dia naminavina fa ny vato ilaina amin'ny hetsika toy izany dia efa azo antoka, na dia tsy nangataka tamin'ny fomba ofisialy aza ilay Fanjakana.
Ny tsaho momba ny hetsika toy izany dia nahatonga an'i Espana sy ireo mpiara-dia EU sasany tsy ho liana amin'ny fahalianana. Miroso tanteraka ny hetsika diplaomatika ao ambadiky ny seho, raha ny filazan'ny azo antoka eTurboNews loharanom-baovao.
Solontena iray avy amin'ny UNWTO avy amin'ny firenena eropeana iray no miankina betsaka amin'ny fizahan-tany eTurboNews, izy dia nanana fahefana hifidy araka izay itiavany azy, ary hifidy ny hifindra izy raha eo amin'ny latsa-bato.
Niantso ny printsy saodiana ny praiminisitra espaniola iray volana lasa izay. Voalaza fa ny anton'ny fiantsoana dia ny hetahetan'i Riyadh amin'ny mety ho fihetsiky ny foiben'ny UNWTO.
Roa herinandro lasa izay ny Sekretera jeneralin'ny ONU António Guterres tafiditra, ary najanona ny tetik'asa arakaraka ny fifanarahana hamaranana ny minisitry ny fizahantany saodiana miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy, ny minisitry ny fizahantany espaniola.
Nisy olona nahazatra an'ity dinika nifanaovan'i Arabia Saodita sy Espana ity nilaza eTurboNews: “Mandeha ny dinika eo amin'i Espana sy Arabia Saodita saingy kivy ny lafiny Saodiana noho ny hafainganan'ny fandrosoana. FII ny faran'ny volana oktobra dia fotoana lehibe ho an'ny fizahan-tany, miaraka amin'ireo minisitra sy mpitarika orinasa maro any Riyadh. Enga anie ka ho eo i Maroto. ”
Ny Hon Reyes Maroto dia minisitry ny fizahantany any Espana.
Manam-pahaizana fanta-daza sy hajaina any Eropa akaiky ny UNWTO, izay tsy te hiteny anarana eTurboNews:
“Raha heverin'i Espana fa ny tetika fanemorana dia midika fa manakana an'i Arabia Saodita tsy hanohy hanao fampielezan-kevitra izy ireo hamindra ny UNWTO mankany Riyadh, dia mety ho diso izy ireo. Mbola misy fotoana hanerena. Any Italia i Maroto, amina hetsika ara-barotra, ary tsy ny fizahan-tany no ifantohany. “
Loharanom-baovao iray hafa no nilaza eTurboNews: "Toa nisy ny fanoloran-tenan'i Espana tamin'ny singa lehibe nangatahan'ny Arabia Saodita mba hisakanana ny tsy fangatahana io hetsiky ny foibe io."
Na izany aza, hita ihany koa fa ny hafainganana amin'ny famaranana io fanoloran-tena io dia mety ho ilay olana manakorontana ny Saodiana.
eTurboNews dia nanatona ny minisitry ny fizahantany Espaniôla sy ny Saudi. Tsy nahazo fanazavana fanampiny.